“အသေးစားလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများကိုဝယ်ယူ +စိုက်ပျိုးရေးသုံးကိရိယာ” – Tractor Loader
Posted on October 9, 2018 by Heather Willis
2. ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံး biogas များ၏ထုတ်လုပ်မှုကတည်းကကဆိုလိုသည်မှာတိုက်ရိုက်ပြည်နယ်ထောက်ခံမှုလိုအပ်ပြီး, အုပ်ချုပ်ရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေ။ ဒီဧရိယာထဲမှာစျေးကွက်-based ယန္တရားများမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အစဉ်အမြဲပစ္စုပ္ပန်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သောအရာရှိတွေရဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကပုံမှန်, အပြိုင်အဆိုင်, လွတ်လပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလက်ခံနိုင်မဟုတျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။
သော RC – မြေ၌ပေါက် (အပေါက်) ၏အပိုင်းအချင်းဝက်; Sigmaupl – မြေဆီလွှာကိုခုခံကိန်း; u0 – ဖောက်ရှေ့တော်၌ထိုမြေဆီလွှာ၏ porosity, တန်ချိန် – 1 မီတာပြွန်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက် (အိမ်မှ), ကီလိုဂရမ်: L ကို – ထိုးဖောက်မှုအရှည် (ထိုးဖေါက်ခြင်း) မီတာ,f– မြေပြင်ပေါ်တွင်သံမဏိပွတ်တိုက်၏ကိန်း။
ဇိမ္ခံ သေဘ္ာေပၚတြင္လိုက္ပါလာေသာ အပ်ိဳေခ်ာတစ္ဦး၏ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေရးထားသည္။ပထမေန႔…အပ်ံစားသေဘ္ာျဖစ္သည္။သေဘ္ာေပၚရွိေယာက်္ားမ်ားတြင္ captain သည္ အေခ်ာဆံုး အခန္႔ဆံုး ျဖစ္သည္။ဒုတိယေန႔…ထမင္းစားခန္းတြင္ captain ႏွင့္တစ္စားပဲြတည္း က်သည္။တတိယေန႔…သေဘ္ာကို captain က လို္က္ျပသည္။ထို႔ေနာက္ ခ်စ္ေရးဆိုသည္။စတုတၳေန႔….ယေန႔ည သူ၏အခန္းသို႔မလာပါက သေဘ္ာကို ေမွာက္ပစ္မည္ပာု ျခိမ္းေျခာက္သည္။ပဥၥမေန႔…မေန႔က ညက ခရီးသည္ 380 ႏွင့္ သေဘ္ာသား 120 တို႔၏ အသက္ကို ကယ္တင္လိုက္သည္။
တချို့ကဖန်လုံအိမ်အတွင်းရှိဖရဲသီး၏စိုက်ပျိုးမှုအတွက်စေ့စပ်နေကြတယ်။ ဖရုံသီးပျိုးပင်မှဖရဲသီးအစားထိုးပေးသည့်ခွဲစိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့စမ်းသပ်ချက်အရှင် superearly ဖရဲသီးရရှိခဲ့သည်။ စပါးရိတ်ရာကာလကိုလည်း4ကြိမ်အားဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ပျိုးပင်များကြီးထွားဖို့ပြဿနာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တကသေးငယ်ဧရိယာနဲ့ဖန်လုံအိမ်တစ်လျောက်ပတ်သောသီးနှံစုဆောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သိုးတို့သည်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလည်းအတော်လေးအမြတ်အစွန်းဖြစ်ကြသည်။ သိုးသား, သိုးမွှေးနှင့်နို့များအတွက်ဝယ်လိုအားအပြင်, ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များဆိတ်သငယ်ကိုဒိန်ခဲအတော်ပင်။ စတင်အဘို့, သငျသညျအနညျးငယျအကြီးအကဲများကိုဝယ်နိုင်, နှင့်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေးအဖြစ်မွေးမြူရေးများ၏အရေအတွက်ကိုတိုး။ သည်အခြားမွေးမြူရေးနှင့်တူသိုးလယ်ယာစိုက်ပျိုး, တစ်ဦးမျှမျှတတကြီးမားသောဧရိယာလိုအပ်ပြီးထိုကြောင့်ထိုအဖြစ်မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အထူးသဖြင့်, ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ပညတ်တရားအတိုင်း / x ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အရောင်းရဆုံးနှင့်အတူကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ရရှိခဲ့ကြသည်ထားတဲ့ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်စုများ၏အဖွဲ့ဝင်အခွန်ဝင်ငွေမှဘာသာရပ်လွတ်လိမ့်မည်။
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သဇင္ေရေက်ာ္ေက်းရြာအနီးရွိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားကို ငါးေမြးကန္တူးေဖာ္ေနသည့္ကိစၥအား ေျဖရွင္းျခင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံ လယ္သမား(၁၅၀) ေက်ာ္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ(၂၇)ရက္ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မင်းဘူးမြောက်ဘက်သို့ ကားမောင်းသွားရင်း ကျွန်တော်သည် မန်းရေနံမြေ ပိုင်နက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီိး ရေနံမြေအလွန် ကျေးရွာများနှင့် လယ်ယာများသို့လည်း သွားရောက်နိုင်သည့် ပင်မဝင်ပေါက် သုံးခုကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ ယင်းဝင်ပေါက်များတွင် အမ်ပီအာရ်အယ်လ်မှာ လုုံခြုံရေးဝန်ထမ်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိသည် “ဝင်ခွင့်မပြု”နှင့် “တားမြစ်ဧရိယာ” ဟု သတိပေးကြေညာထားသော ဆိုင်းဘုတ်များ စီတန်းထောင်ထားသည့် အောက်တွင် စခန်းချနေကြသည်။ ကျွန်တော်သည် နောက်ဆုံး ဖုံထူသော လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ကွေ့ပတ်ဝင်ရောက်ပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ့် ပိုင်နက်နယ်မြေထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
တူးဖော်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏမှဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းသတင်းထောက်ကိုတင်သော၏ပွင့်လင်းနည်းလမ်း; ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီနည်းလမ်းကိုလမ်းများညစ်ညူးစေကပုံမှန် DV-izhenie သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး disrupts နှင့်လမ်းအဖုံး၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရေနံတွင်းတူးစက်။ directional တူးဖော်ခြင်းစျေးကြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများဖျော်ဖြေနေသည်။ အဆိုပါ HDD များအတွက်စက်မှုစက်ပစ္စည်းဘောင်အဆောက်အဦများနေသောခေါင်းစဉ်: သူတို့တစ်တွေကိုယ်ထည်, ဒီဇယ်လောင်စာအပေါ်ပြေးတစ်ဦးအင်ဂျင်နှင့်ကိုယ်ထည်ထားရှိရေး။ အလှည့်၌, functional ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောက်ပါဒြပ်စင်များရှိပါတယ်: တစ်တူးဖော်ခြင်းရထား, ရေထောက်ပံ့များအတွက်ရေပိုက်တွေနဲ့ရေအားလျှပ်စစ်ဘူတာရုံများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့တစ် panel က။
installation အပြောင်းအလဲနဲ့ချေး, ကြက်သားချေးနှင့်မြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမဆိုကြင်နာတခြားအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ Biogas တပ်ဆင်ခအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်နှင့် biogas ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပါဝါစနစ်၏စွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်မြို့ပြ utilities အတွက်လျှောက်လွှာကိုရှာပါ။
”စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်နေမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီမံကိန်းမြေနေရာ ရှင်းလင်းခြင်း၊ စီမံကိန်းအဝင်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဓာတ်အားတွေ ပို့လွှတ်မယ့် ၂၃ဝ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း ၁ ဒသမ ၃ မိုင် တည်ဆောက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်အား ရယူရန်အတွက် ၁၁ ကေဗွီလိုင်း ၁၅ ဒသမ ၅ မိုင်နှင့် သုည ဒသမ ၄ ကေဗွီလိုင်း သုံးမိုင် တည်ဆောက်ခြင်း၊ စက်ရုံအတွက် လိုအပ်တဲ့ရေရရှိဖို့ Underground Tube Well သုံးခု တူးဖော်ခြင်း စတဲ့လုပ်ငန်းတွေ အားလုံး ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊ စီမံကိန်း ပထမအဆင့် မဂ္ဂါဝပ် ၄ဝ တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ မြေသားပြုပြင်ခြင်းနဲ့ Solar Panel ၁၅၉၄၈ဝ ကို လုပ်ငန်းခွင်သို့ ရောက်ရှိ နေရာချထားပြီးတော့ ကျန်ရှိတဲ့ စီမံကိန်း ပထမအဆင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
၁၈။	လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော မြေအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို နိုင်ငံတော်နှင့် အများ ပြည်သူအကျိုးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်သိမ်းယူသည့်အခါ သိမ်းယူသည့် အချိန်ကာလအထိ စိုက်ခင်းတည်ထောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မူလစီမံချက်ပါ ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ စိစစ် အတည်ပြုသည့် တန်ဖိုးငွေအား ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့သိမ်းယူသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်အပ်နှံ ရမည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုအပ်သည်။ သာကိရိယာများ 2-3 သန်းရူဘယ်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏လယ်ယာဖွင့်ရှေ့တော်၌ထိုကွောငျ့, သင်တို့တစ်လျောက်ပတ်သောက start-up, မြို့တော်စုဆောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကောက်ပဲသီးနှံ၏စောင့်ရှောက်မှု။ ပေါင်းပင်၏ plantlets ၏အပေါ်ယံလွှာနှင့်အဗဒ္ဒုန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ pre-ပေါ်ပေါက်ရေး Harrow သုံးစွဲလျော့ရဲများနှင့် rotary hoes ။ နောက်ပိုင်းတွင်ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆက်တွဲကုသမှုထဲမှာ 8-10 စင်တီမီတာမှာ 12-15 စင်တီမီတာအနက်ဖို့ဖျော်ဖြေအပြောင်းအလဲနဲ့ interrow ။ အတန်းနှင်တံအကြား processing တဲ့အခါမှာရှုတ်ထွေးအပင်လယ်ထွန်စက်နှင့်လုပျသောသူဖွများ၏ဘီးမထိခိုက်စေရှောငျရှားဖို့ခြမ်းဖို့ဖယ်ရှားရမည်။ perepuhyvaniya လေတိုက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့သူတို့ကိုရေနံစိမ်းသည်မြေဆီလွှာနှင့်အတူဖြန်း whips ။ ဤသည်စက်ရုံအစာအာဟာရတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်ဟုအပိုဆောင်းအမြစ်များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရလဒ်ကောင်းအထီးပန်းပန်းပွင့်ချိန်အတွင်း (လိုက်ဖမ်း) အားလုံးကြိမ်ဒဏ် pinching အားဖြင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Voronezh စိုက်ပျိုးရေး Institute ၏စမ်းသပ်ချက်များတွင်ဖရဲသီး feed ကိုလိုက်ဖမ်း 1 ဟက်တာနှုန်း 66.7 centners ဖို့အထွက်နှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ ဖရဲသီး၏ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးရှည်လျားမတိုင်မီစတင်။ ပန်းပွင့် 3-5 ရေဖြုန်းနှင့် 10-15 ရက်အတွင်း၏ကြားကာလမှာ။ ယာယီရပ်တန့်နှင့်အသီးအစုံမှာသူတို့ကိုပြန်လည်စတင်ရေလောင်းပန်းပွင့်စဉ်အတွင်း။ 1 ဟက်တာနှုန်းရေ 600-800 မီတာ3ရေလျှောက်လွှာနှုန်းသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရေလောင်းတန်းစီအကြား hoeing ထွက်ယူသွားတတ်၏ပြီးနောက်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးသော ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံများတွင် အရေးကြီးသောစွမ်းအင်မှာ လျှပ်စစ်ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံများသာလျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားသော စီးပွားရေး ကောင်းမွန်သော အင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်ခဲ့ကြသည်မှာငြင်း၍မရပေ။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကိုနည်းမျိုးစုံဖြင့် ရှာဖွေထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
သူကဆက်ပြီး “ကျွန်တော် စတန့်ထွင်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ တစ်ခါမှ မကြည့်ဖူးပါဘူး၊ ဒီလို လယ်ထွန်စက်အကြီးကြီး တွေ နဲ့စတန့်ထွင် ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။ အစပထမ မှာတော့ စတန့်ထွင်ဖို့ တကယ်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး၊ လယ်ထွန်စက်က လှုပ်တောင်မလှုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် သုံးလအကြာမှာတော့ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” လို့သူကပြောပါတယ်။
ဖရဲသီးကိုစိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့မြို့ဆင်ခြေဖုံး၌ရှိကြ၏လျှင်အခုတော့ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းဆိုလိုသည်မှာဆိုက်ဘေးရီးယားတွင်, Urals နှင့်အလယ်တန်းလမ်းသွားအတွက်, ခွဲဝေချထားပေးရန် တစ်ဦးအလင်းမရှိခြင်း, အပူ, ရွာသွန်းခြင်းနှင့်မြေဆီလွှာရှိစေခြင်းငှါရှိရာနေရာဒေသအတွက်အတော်လေးသင့်လျော်သောမဟုတ်ပါ:
ပိုက် (ထည်) vibro Bailer (ပုံ။ 21.5, နေရာချစကာအတွင်းပိုင်း က c) ။ပိုက် (ထည်) နစ်မြုပ်သည့်အခါပွင့်လင်းဆုံးအခြို့သောအကွာအဝေး (Stopes) ကမြေဆီသို့မိတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ bottomhole အဆုံးမှပေးဝေရေးကြိုး bailer, မြေသို့ vibromolota ကနေတဆင့်မိတ်ဆက်, ကထယူလိုက်တယ်နှင့်ကြိုး အသုံးပြု. သည်အဘယ်မှာရှိလှုပ်ခြင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်, ပြတင်းပေါက်ကိုထမ်းရွက်ဖို့ရောမွှေပါလိမ့်မယ် vibromolota မြေပြင် bailer ဟာကတုတ်ကျင်း၏အောက်ဆုံးမှပြတင်းပေါက်ထည်များ၏ကိုင်တွယ်အတွက်ပြတင်းပေါက်မှတဆင့်သွန်းလောင်းလေ၏။
အစွမ်းထက် KamAz 740.31 240 turbocharged နှင့် intercooled လေထုအအေးတပ်ဆင်ထားပါဝါယူနစ် 45143 ထရပ်ကားဒီဇယ်အင်ဂျင်အဖြစ်။ KAMAZ 45143 ထရပ်ကားအင်ဂျင်ဥရောပမှာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်သောယူရို-2 အများဆုံးအင်ဂျင် output ကို 240 မြင်းကောင်ရေနှင့်အင်ဂျင် KAMAZ 45143 10,85 လီတာ၏လေဖြတ်အသံအတိုးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မွင္သက္မိတဲ့အခိုက္အတန့္ဆိုတာ သင့္ရဲ့တဒဂၤအခိုက္အတန့္ကို မွတ္တမ္းတင္ခံရျပီး သင္ကိုယ္တိုင္စိတ္ထဲတနုံ့နံ့နဲ့ ေတြးရင္းရွက္မိေနတဲ့အခိုက္အတန့္ပါ။နည္းပညာတိုးတက္လာတာနဲ့အမ်ွ ဒီလိုဖ်တ္ခနဲမွတ္တမ္းတင္မိလိုက္တဲ့ပံုေတြဟာ မွတ္တမ္းတင္သူရဲ့ကင္မရာထဲမွာပဲရွိေနမွာထက္ လိုင္းေပၚမွာျဖန့္ရင္း တစ္စတစ္စျပန့္လာတတ္ၾကပါတယ္။ဆိုေတာ့ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အင္တာနက္တ၀ွမ္းမွာ ပ်ံ့နွံ့ေနတဲ့ မွင္သက္စရာအခိုက္အတန့္ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ။ 1.ျဂိဳလ္ကမာၻကလာတဲ့ ျဂိဳလ္သားမ်ားလားကြာ..။ 2.ထိခ်က္ကျပင္းတယ္..။ 3.ဒီေလာက္ေဆာ္ပံုေထာက္ရင္ေတာ့ ခိုေတာ္ေတာ္ေဒါပြေနလို့ေနမွာ…။ 4.ေဟး သူငယ္ခ်င္း နင္အပူၾကိဳက္လား အေအးၾကိဳက္လား? 5.ေလာင္စာမလိုဘူး …
ရေနံတွင်းတူးရဲ့ start ရှေ့တော်၌ထိုကောင်းစွာဖို့မြေအောက်ကနေအတိအကျညွှန်ကြားချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ စပါးမြေအောက်၏အောက်ခြေကနေ 250 မီလီမီတာအမြင့်မှာမည့်အကြောင်းအားတက်သရောပြောခဲ့သည်နှင့် 10 °ရေတွင်းဆီသို့တစ်လျှောစောက်အတူ။ တူးဖော်နည်းပညာရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဦးတည်ချက်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း setting, tuck 10 ကိုကိုင်တွယ် – ဖိအားနှင့်အတူ 15 ကြိမ်။ ထိုအခါသင်ကလေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းဆွဲထုတ်နှင့်အိုးအိမ်နှင့်လက်စွပ် nabivshiysya မြေထဲကလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းချောင်းတွေရဲ့အပိုဆောင်း elongated အတူထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ထောက်ကဒီမှာဆက်ဆံအတူပိုမိုမြန်ဆန်တစ်နှစ်ခွဲကြိမ်ဝင်သတိပြုပါ။
မယား – ရွင္ ကြ်န္မဓါတ္ပံု ကုိ ေန.တုိင္းရံုးတက္တဲ.အိတ္ထဲထည္.ထည္.ထားတယ္။ဘာလုိ.လဲ။လင္ – ေၾသာ္ ဘယ္ေလာက္ ၾကီးမားတဲ. အခက္ခဲ ၾကံဳရ ပါေစ မင္းဓါတ္ပံုကုိၾကည္.လုိက္တာနဲ. အားလံုးကုိ ေက်ာ္လြားနုိင္ခဲ.တယ္။မယား – ၾကည္.စမ္း၊ ကြ်န္မ ဟာ ရွင္.အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိးရွိသလဲ ေနာ္။လင္ – ဟုတ္ပါ.၊ မင္းဓါတ္ပံုကို ၾကည္.ၿပီး ငါ.ကုိယ္ငါ ၿပန္ေမးၾကည္.တယ္၊ “ဒီထက္ဆုိးတဲ. အခက္အခဲ ဘာရွိနုိင္ဦးမွာလဲ” လုိ.
biogas အပြောင်းအလဲနဲ့စွန့်ပစ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရရှိသောဖွဲ့စည်းမှု 50-60% မီသိန်းနှင့် 40-50% ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့ပါဝင်သည်။ ရေအပူပေးစက်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့မီးစက်, လေအပူပေးစက် – Biogas ပြည်တွင်းဓာတ်ငွေ့ကရိယာ operated နိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော အမှတ်(၂) ရေနံချက်စက်ရုံ(ချောက်)မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆီပြာ Blue Oil များကို တစ်ဂါလန် လျှင် ၂,၁၅၀ ကျပ် (ကျပ်နှစ်ထောင့်တစ်ရာငါးဆယ်တိတိ) နှုန်းဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း လွတ်လပ် စွာ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါ၍ မည်သူမဆို လျှောက်ထားဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
One Reply to ““အသေးစားလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများကိုဝယ်ယူ +စိုက်ပျိုးရေးသုံးကိရိယာ””
Clayton Washington says:
အလျားလိုက်တူးဖော်ခြင်း၏ Method ကိုထိုးဖေါက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိမ်းဖြင့်တဲ့အခါမှာထက်အတော်လေးလျော့နည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူလုံးဝနီးပါးမဆိုအချင်း၏ bestransheyioy ပိုက်လိုင်းများထုတ်လုပ်ဖို့ရာအရပျယူနိုငျသညျ။ သို့သော်ဤအတူသိသာအားနည်းချက်ကတော့တူးပေါက်များမှမြေဆီလွှာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နည်းပညာအသစ် tunneling အလျားလိုက်ပြုပြင်ခြင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်လှိမ့၏မြေဆီလွှာကိုဖယ်ရှားနည်းလမ်းမရှိဘဲယနေ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးခံရ။ ဒီထုံးစံ၌ tunneling တူးဖော်အထူးတပ်ဆင် အသုံးပြု. လည်ပတ်နေတဲ့ပန်ကာ-type အမျိုးအစားဓါးသွားတပ်ဆင်ထား, အလုပ်လုပ်ခေါင်းကိုဖြတ်တောက် gruntoraskatyvayuschih ။ ယင်းကိုလှိမ့ယန္တရား (ပုံ။ 21.7) ကဖွဲ့စည်းထားသော annular အာကာသသို့ကျွေးမွေးဒီဇိုင်း primer လွန်။
ကျနော်တို့ကအမြဲနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသို့မဟုတ်လေတိုက်စွမ်းအင်ကိုအသုံးမနိုင်ကတည်းကကြောင့်အရံစွမ်းအင်ကိုသတင်းရပ်ကွက်၏လုံလောက်သောထိတ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဤအမှု၌, လောင်စာဆီ briquettes ချေးအပါအဝင်ထုတ်လုပ်ကောင်းတစ်ဖြေရှင်းချက်နိုင်ပါတယ်။ လောင်စာဆီ briquettes ထဲမှာ “အစိမ်းရောင်” စွမ်းအင်စုပြုံဓာတ်ငွေ့ကိုင်ဆောင်သူအတွက် biogas ထက်အများကြီးပိုလွယ်သည်။
စက်မှုဇုန်တူးဖော်စက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤဖွဲ့စည်းပုံကိုသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည် – အကျဉ်းချုပ်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်, တူးဖော်ခြင်းမည်သူမဆိုမိမိတို့၏ကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်အမှုကိုပြုနိုင်ပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ဘုတ်အဖွဲ့ kamaza ၏ width ကြီးမားသော Multi-တစ်တန်ဝန်သယ်နိုင်ပါတယ်။ KAMAZ အပေါ်ဘုတ်အဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စက်ယန္တရား KamAZ (Kamas မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံ) ၏ထုတ်လုပ်ခြင်း 1976 ခုနှစ်တွင်စတင်ပေးခဲ့သည်။ မူလ KAMAZ မူရင်းအရွယ်အစားမှာ ZIL-170 စက်တွေ, ခန္ဓာကိုယ်-board ရဲ့အခြေခံပေါ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တာဒီကား Zilovskoye ကှာခွားခဲ့ပါဘူး။
Previous PostPrevious “جون دير المعدات المستخدمة، _جون دير جزازة العشب أجزاء”
Next PostNext “john deere in |john deere lawn tractors”